गुगल ग्लास बारे लोकप्रिय मिथक debunks - समाचार नियम
गुगल ग्लास बारे लोकप्रिय मिथक debunks
गुगल ग्लास OOB अनुभव 27126 (फोटो क्रेडिट: को tedeyt)
Augmented रियलिटी Eyewear गुगल ग्लास अन्याय उपचार गरिएको छ, या त आफ्नो डिजाइनर लाग्छ, र शेष redress गर्न Google debunked छ “शीर्ष दस मिथकों” यसको बारेमा.
भ्रम 1 – ग्लास वास्तविक दुनिया देखि परम व्याकुलता छ. गुगल अनुसार, “ग्लास पूर्वनिर्धारित र केवल जब तपाईं यो हुन चाहनुहुन्छ मा बन्द छ।” अर्को शब्दमा, यो केवल जब यो मा छ मा छ र यसैले यो तपाईं विचलित छैन, यसले गर्छ नभएसम्म.
भ्रम2– ग्लास सधैं र सबै रेकर्ड छ. गुगल भने, “ग्लास लागि डिजाइन छैन वा रेकर्डिङ सधैं-सक्षम (ब्याट्रि भन्दा लामो पछिल्लो छैन 45 मिनेट यसलाई आवश्यक अघि चार्ज गर्न).” यो अझै पनि हुनत मा आएको एक रेड लाइट वा केही थियो भने राम्रो हुनेछ, छैन यसलाई हुनेछ?
भ्रम3– ग्लास खोजकर्ता प्रविधि-उपासना geeks छन्. यसको खोजकर्ता भने, वा बीटा परीक्षकको, समावेश “आमाबाबुले, firefighters, zookeepers, brewmasters, फिलिम विद्यार्थीहरू, संवाददाता, र डाक्टर।” यो पनि ग्लास तिनीहरूलाई कम प्रविधिको प्रयोग बनाउँछ भन्ने दावी “तिनीहरूले किनभने थप कुशलतापूर्वक यसलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ”. हामी साँच्चै छैन भनेर बयान को बनाउन के निश्चित हुनुहुन्न, त्यसैले हामी प्रतीक्षा र आमाबाबुले देख्नुहुने, firefighters, zookeepers, brewmasters, फिलिम विद्यार्थीहरू, संवाददाता, र डाक्टर मा लन्च दिन लाममा पहिलो हो.
भ्रम4– ग्लास प्रमुख समयको लागि तयार छ. यो एक प्रोटोटाइप उपकरण र छ कि गुगल हामीलाई सम्झना “भविष्यमा, आजको प्रोटोटाइप भनेर हामीलाई रूपमा हास्यास्पद लाग्न सक्छ मोबाइल फोन मध्य 80s देखि।” के छैन, गुगल. भविष्यमा छैन, अब.
भ्रम 5: ग्लास अनुहार पहिचान गर्छ (र अन्य छली कुराहरू). गुगल भने होइन. ठिकै छ, होइन. अझै.
भ्रम 6: ग्लास आफ्नो आँखा समेट्छ(को). गुगल स्क्रिन सही आँखा माथि वास्तवमा छ भने. हामी पांडित्य हुन चाहन्थे भने हामी यो एक हो भन्न चाहन्छु चश्मा को जोडी त्यसैले को पाठ्यक्रम यो आँखा समेट्छ, तर हामी हुनेछ.
भ्रम7– ग्लास सिद्ध निगरानी उपकरण छ. गुगल यो साह्रै हसाउने पाउन देखिन्थ्यो. यो भने, “कसैले चुपके तपाईं रेकर्ड गर्न चाहन्छ भने, त्यहाँ धेरै छन्, धेरै राम्रो क्यामेरा बाहिर त्यहाँ भन्दा तपाईं आफ्नो अनुहार मा conspicuously लगाउने र अप तपाईं आवाज आदेश दिन हरेक समय रोशनी एक, वा बटन थिच्नुहोस्।” न्यायसङ्गत.
भ्रम 8 – ग्लास मात्र यो खर्च गर्न पर्याप्त सुअवसर पाउनुभएको लागि हो. त्यहाँ समाप्त उपकरण वर्तमान भन्दा एकदम कम खर्च हुनेछ भनेर अफवाहहरु हो $1,500 मूल्य. तर गुगल केही खडा पैसा Kickstarter र Indiegogo मार्फत यो किन्न भने. के, साँच्चै? हामी कार्यालय लागि नयाँ फ्रिज लागि पैसा जुटाउने प्रयास गर्न जाँदै हुनुहुन्छ.
भ्रम9– ग्लास प्रतिबन्ध लगाइएको छ… जताततै. गुगल चेतावनी दिए, “बस मनमा, ब्यानरहरू थियो-हुन: ग्लास निर्धारण लेंस संलग्न गर्न सकिन्छ, त्यसैले आवश्यकता ग्लास बन्द गर्न शायद धेरै मान्छे लकर कोठामा आँखा बंद बारेमा चुक्छौं ढिपी भन्दा सुरक्षित छ।” हामी पहिले देखि नै मान्छे सवारी चलाउँदा ग्लास लगाएका पक्राउ गर्नुभएको थियो भइरहेको र चलचित्र पाइरेसी लागि एफबीआई द्वारा आयोजित दिइएको, हामी जान एक लामो बाटो भयो.
भ्रम 10 – ग्लास गोपनीयता को अन्त निशान. गुगल मान्छे क्यामेरा लाग्यो कि औंल्याए, भिडियो क्यामेरा र सेलफोन सबै गोपनीयता को अन्त signaled, तर वास्तविकता मा, र एक पल्ट उनि साधारण भए, यो चिन्ता तल मृत्यु. यो अन्तिम बिन्दु हाम्रो ल्याउँछ हाम्रो कुराको इन्टरनेट बहस.
यो प्रश्न powering छ धारण प्रविधि विकास कुराको इन्टरनेट को वृद्धि मा यो हप्ता एक बहस चलिरहेको छ. हामी कुराको इन्टरनेट गोपनीयता मार्नेछ कि आफ्नो दृष्टिकोण सुन्न चाहन्छु, वा स्मार्ट उपकरणहरू संकलित प्रयोगकर्ता डाटा पर्याप्त सुरक्षित गरिनेछ कि.
स्रोत: यो प्रश्न
24705	0 augmented वास्तविकता, गुगल, गुगल ग्लास, Indiegogo, Kickstarter, मोबाइल फोन, परियोजना ग्लास, निगरानी
← अन्तरिक्ष यात्री ठाउँ मा कूटनीतिक खिचलो कसरी बाँच्न फिक्री चोर हो →